विवाहमा गोलभेँडाकै गहना–सिक्री र गोलभेँडाकै रिङ! - Everest Dainik - News from Nepal
विवाहमा गोलभेँडाकै गहना–सिक्री र गोलभेँडाकै रिङ!
काठमाडौंः सामाजिक सञ्जालमा अहिले पाकिस्तानमा बेहुलीले गोलभेँडाका गहना लगाएर विवाह गर्न लागेको भिडियो भाइरल भएको छ ।
गोलभेँडाको मूल्य आकाशिएको भन्दै बेहुलीले सुनका गहना लगाउन छाडेर टमाटरका गहना लगाएको बताएकी हुन् ।
लाहोरकी ती युवतीले गोलभेँडा सुन जस्तै महंगो हुँदै गएको हुनाले आफूले सुनका गहना जसरी नै गोलभेडाको प्रयोग गरेको बताइन् ।
याे पनि पढ्नुस विवाह गरेर लैजाँदै गर्दा बेहुली नै बेपत्ता !
ट्याग्स: गोलभेँडाकै गहना, विवाह